Etu esi eji igwe igwe ihe eji agbanwe igwe dika ihe di nma?
site na nhazi na 20-07-24
Igwe ntụgharị ntụgharị bụ ihe kachasị mkpa maka imepụta ngwa ọrụ na mmepụta nke igwe na-agbanwe. Arụmọrụ ikuku ya na-ekpebi njirimara eletriki nke onye na - agbanwe ma ọ bụ igwe mkpuchi mara mma. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụdị igwe ihe ikuku atọ maka transf ...
Silicone abanyela ndụ anyị n'ụzọ dị iche iche. A na-eji ha maka ụdị ejiji na akwa akwa. Dịka a na-eji kọlọ na akwa akwa maka akwa, ndị nnọchi anya, akwa akwa, akwa akwa na akwa mmiri. Ọ bụ ezie na eji mmiri na emulsion eme ihe maka ịchacha akwa, lubricants na p ...
resin-gbanwetụrụ mmiri silicone
mmiri silicone resin-gbanwetụrụ, dị ka ụdị akwa ọgbara ọhụrụ, na-ejikọta ihe resin na organosilicon iji mee ka akwa ahụ dị nro ma mee ka ọ dị nro. Polyurethane, nke a makwaara dị ka resin. N'ihi na o nwere ọnụọgụ dị ukwuu nke rere ureido na usoro estine dị elu, ọ nwere ike ịgafe njikọ iji mepụta fim…
Nkwupụta nyocha D4 ọhụrụ anyị kwekọrọ na nkwupụta ọhụụ
site na nhazi na 20-06-30
Akuko nyocha D4 kacha ọhụrụ dabara na nkwupụta ọhụụ Download
Iwu usoro na-agbakwụnye ihe amachibidoro D4 na ịsacha ihe ịchọ mma, D5, dị irè na Jenụwarị 31, 2018
- D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) D4 - D5 (Decamethylcyclopentasiloxane) D5 - D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) D6 mmachi nke D4 na D5 na Nlekọta Onwe Gị ： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) na decamethylcyclopentasiloxX agbakwunyere XZ ka agbakwunyere XAC ka ha bụrụ ....